Cayaaraha - BBC News Somali
Tababaraha kooxda Liverpool Jurgen Klopp ayaa rumaysan in "rabitaanka, hab dhaqanka iyo tayada qaab ciyaareedka" kooxdiisa Liverpool ay ka qaalib noqon doonto Real Madrid.
Arsenal oo lafilayo in ay magacawdo Unai Emery
Kooxda Arsenal ayaa lafilayaa in ay tababare u magacawdo Unai Emery isaga oo badali doona Arsene Wenger.
Mourinho : Chelsea uma qalmin in ay qaaddo koobka FA Cup-ka
Tababaraha kooxda Manchester United Jose Mourinho ayaa aaminsan in aysan kooxda chealsea u qalmin in ay qaaddo koobka FA Cup isagoo kooxda ku eedeeyay in ay "sagaal qof " ku difaacanayeen goolka.
Atletico Madrid oo markii saddexaad ku guulaysatay koobka Europa League-ga
Kooxda Atletico Madrid ayaa fiinaalka koobka Europa League-ga waxa ay xalay 3-0 uga badisay kooxda Olympique Marseille.
Madaxii caafimaadka ee Arsenal oo shaqada laga eryay
Madaxa adeega caafimaadka ee kooxda Arsenal, Colin Lewin ayaa waayay shaqadiisa, kadib 23 sano oo uu ka howlgalayay horyaalka dalka Ingiriiska.
Pochettino: Waa in khatarta loo bareero si horumar loo gaaro
Tababaraha kooxda Tottenham hotspur, Mauricio Pochettino oo ka hadlay mustaqbalka kooxda ayaa waxaa uu sheegay inuu doonayo in mustaqbalka kooxad uu kala hadlo guddoomiyaha kooxdaasi, Daniel Levy.
Yaa badali doona Arsene Wenger?
Kooxda Arsenal ayaa weli baadigoob ugu jirta sidii ay u heli lahayd macalin cusub oo kooxda leyliya, kadib markii uu Arsene Wenger shaaciyay inuu kooxda ka tagayo.
Maxaa ka jira in Weyne Rooneey uu u wareegayo Maraykanka?
Wayne Rooney oo u ciyaara kooxda Everton ayaa ogolaaday heshiis uu kooxda uga tagayo isagoo ku biiraya kooxda DC United ee dalka Maraykanka, iyadoo ay hadda socdaan wadahadalo amuurtaasi la xiriira
Damaashaadka Huddersfield oo dibindaabyo ku noqday Chelsea
Huddersfield Town ayaa xaqiijisay ka sii mid ahaanshaha horyaalka Ingiriiska ka dib markii ay u halgantay in ay dhibic kala hoyato garoonka Stamford Bridge.
Sir Alex Ferguson oo ka baxay qatartii caafimaad ee uu ku jiray
Tababarihii hore ee kooxda Manchester United Sir Alex Ferguson ayaa laga soo saaray qaybta degdega ah ee isbitaalkii lagu dawaynayay ka dib qaliin xaga maskaxda ah oo lagu sameeyey dhowaan
Southampton oo sii noolaysay rajada sii joogidda Horyaalka Ingiriska
Kooxda Southampton ayaa talaabo dheer u qaaday dhanka ka sii mid ahaanshaha Horyaalka Ingiriiska ka dib markii ay ka badisay kooxda Swansea City, arrintaas ayaana horseedday in West Brom ka harto horyaalka.
Kooxda Chelsea oo sii xoojisay loolanka ay ugu jirto tartanka Horyaallada Yurub
Kooxda Chelsea ayaa sii xoojisay rajada ay ka leedahay inay usoo baxdo tartanka horyaallada Yurub ee xilli ciyaareedka dambe, ka dib markii ay xalay 1-0 uga badisay kooxda Liverpool oo ay kula dheeshay Stamford Bridge.
Dad badan oo ka barakacay guryahooda kaddib fatahaadihii ka dhashay wabiga Juba
Dad badan ayaa ka baracay guryahooda, waxaana sidoo kale ay waxyeello soo gaartay dalagyadii beeraha magaalada.
Lubnaan oo doorasho ay ka dhacayso sanado badan kaddib
Ku dhawaad 10 sanno kaddib ayaa waxa ay dadka dalka Lubnaan u dareereen goobaha codbixinta si ay u soo doortaan xubnaha baarlamaanka ee waddankaasi.
Tabobarihii hore ee Man United oo maskaxda laga qalay
Tabobarihii hore ee kooxda Manchester United Sir Alex Ferguson oo shalay galay qaliin degdeg ah oo dhanka maskaxda ayaa haatan la soo sheegayaa in xaaladiisu ay soo hagaageyso.